သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရန်ဈေးကော်မတီနှင့်ကန်ထရိုက်တို့ဂွင်ရိုက်နေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရန်ဈေးကော်မတီနှင့်ကန်ထရိုက်တို့ဂွင်ရိုက်နေ
- Nu Than
Posted by Nu Than on Oct 3, 2012 in Complaint / Claim |6comments
သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရန်ဈေးကော်မတီနှင့်ကန်ထရိုက်တို့ဂွင်ရိုက်ကာလုပ်စားနေကြသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရန်အတွက်RICH LIFEကုမ္မဏီမှဆောက်လုပ်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။သံတဲံဈေးသူဈေးသားများအားသက်ညှာသောအားဖြင့် အောက်ထပ်ဆိုင်ခန်း
ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ကန်ထရိုက်မှ ခြံစည်းရိုးများကာရံသောအခါ နဂိုဈေးမြေ
ထက်ကျော်လွန်ပြီးလမ်းမပေါ်ထိ ကျော်လွန်ကာရံထားပြီးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကွေကောက်ပြီးကာရန်ထားသည်ကိုတွေရှိရပါသည်။ ဟန်တားမည်သူလည်းမရှိသဖြင့်ကားများဆိုင်ကယ်များသွားလာရာတွင်များစွာခက်ခဲကြကြောင်းသိရှိရပါသည်၊ ကားဆိုင်ကယ်တိုက်မှုလည်းများလာပါသည်။ ။ဈေးဆောက်ရန်အတွက်ဆိုကာသံတွဲဈေးကော်မတီဝင်များသည်ကန်ထရိုက်နှင့်ပူးပေါင်းကာ ဈေးကော်မတီများဆိုင်နေရာကောင်းရရှိရန်ပူပါင်းကြံစဉ်ခဲ့ကြသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ဈေးကော်မတီဝင်များမှာ ဈေးမျက်နှာစာများတွင်နေရာကောင်းများရရှိ နေရာယူ ထားကြပြီးပိုသောဈေးဆိုင်ခန်းများကိုလည်း ဈေးကော်မတီမှလက်ကျိတ်ထိုးရောင်းချကာထိုငွေများကို ဈေးကော်မတီမှသိမ်းဆည်းထားမည်ဟုသိရှ်ိရပါသည်။ ဈေးကော်မတီဝင်များ သည်မိမိဆိုင်ခန်းနေရာကောင်းရရှိရန်အတွက်သာလုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်ကြပါသည်။အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ဈေးကြီးမီးလောင်သောအခါဈေးကော်မတီဝင်များမှာမည်သည့်အကူအညီမှ
မီးလုံခြုံရေးမီးသတ်စနစ်လည်းမရှိ၊လုံခြုံရေးစည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းမှုစီစဉ်မှုများလည်းမပြုလုပ်ခဲံ့ ကြပါ ၊ဈေးအတွင်းမီးသတ်ရေရှိမရှိလည်းဂရုမပြုခဲံ့ကြပါ၊ ဈေးမီးကင်းလည်းသေချာစွာချထား
ခြင်းမရှိပါ၊ ဈေးသည်အများစုမှာမီးလောင်ခဲ့ရသဖြင့်ဆုံရှုံခဲ့ရခြင်း ဈေးမှပစ္စည်းများမသမာသူ များကြောင့် ခိုးယူခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံမှု ပိုမိုများပြားခဲ့ရသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ဈေးကော်မတီဝင်
များမှာ ဈေးမီးသတ်နေသူများကိုလည်း ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဈေးကော်မတီနှင့်
မသက်ဆိုင်သလို့နေခဲ့ကြပါသည်။ နေရာပြန်ရရန် ကိစ္စဆိုလျှင် ဈေးကော်မတီမှထိပ်ဆုံး
မှနေရာ ယူဝင်ကြွားခဲံ့ပါသည်။ ဈေးမီးလောင်သောအခါကော်မတီဝင်များအား မမြင်ကြရ
လက်ရှိဈေးကော်မတီဝင်များနေရာကောင်းယူထားကြသူများမှာစိုးသန်း၊မြမောင်၊လှရွှေ၊ တိုးတိုး၊မြင့်အောင်၊ထွန်းကြည့် ဆိုသောမိမိဘာသာကော်မတီလုပ်ထားသူများမှ မိမိနေ
မဲနိုက်ပါသည်။ ယခုဈေးကြီးတွင်လည်း အဆိုပါကော်မတီမှပင် နေရာကောင်းများရယူထားပြီ။
ကော်မတီတစ်ဦးလျှင် ဆိုင်ခန်း(၂)နခ်း(၃) ခန်းစီရယူထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်။၄င်းပြင်ဆိုင်
ခန်း(၁၀၀) ကျော်ကိုလည်း လမ်းမများကိုပိတ်ပြီး၎င်း၊လမ်းမများကို ကျဉ်းပြီးအခန်းဂ(၁၀၀)
ကျော်ရောင်းချထားပြီး၎င်းတို့လက်ထဲတွင် ကျပ်သိန်း(၂၀၀၀) ကျော်ရရှိပြီးလုပ်စားနေသူများ
ဈေးကန်ထရိုက်သည် ဈေးဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အုတ်များကို ဈေးသက်သာ
ပြီးကန်ထရိုက် အမြတ်ရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်လက်ဖြစ်အုတ်များကိုဘိလပ်မြေပါသည်
ဆိုရုံမျှဖြင့်ပါပြီးသဲတို့ဖြင့် အုတ် ထုတ်လုပ်နေပါသည် ။ပုံမှန်အုတ်တခဲ့၏တန်ဘိုးမှာယခု
လက်ရှိ ၇၅ ကျပ်ပေါက်ပြီး ကန်ထရိုက်တို့၏အုတ်မှ ၁၀ ကျပ်သာကျသည်ဟုသိရှိရပါသည်။
ခိုင်ခန့်မှုမှာ ယခုကန်ထရိုက်အုတ်များမှာ လက်သည်ဖြင့်ဖဲ့ရုံဖြင့်ကျိုးပျက်သွားသောအပေါစား
အုတ်များဖြစ်ရာ သံတွဲဈေး၏ခိုင်ခန့်မှုမှာ များစွာစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိကြောင်း အချိုအဆိုအရ ဈေးမီး
ထပ်မံလောင်မှ အုတ်ကျက်သွားမည့် အနေအထားသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။မီးဖြင့်ဖုတ်
သောအုတ်များမှ ယခုကန်ထရိုက်အုတ်နှင့် ခိုင်ခန့်မှုကွာခြားလှပါသည်။။ဈေးဆိုင်ခန်း
ဈေးကော်မတီတို့လုပ်စားမှုဖြင့်ကျပ်သိန်း(၂၀)ကျော်ဖြင့်အမြတ်တင်ရာင်းစားမည်ဖြစ်ပါသည်။. ထိုပြင် အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့စွာဈေးအိမ်သာကို နဂိုနေရာတွင်မထားရှိဘဲ အလည်
တန်းကျောင်း အနီး လမ်းမကြီးပေါ်မျက်နှာစာတွင် စုတ်ပျက်နံ့စော်သွားစေရန် ဆောက်လုပ်
မည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ကလေးများနှင့်မသင့်တော်ဆိုကာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့် မြို့မိမြို့
ဖများမှ ၀ိုင်းဝန်းကန်ကွက်ကြသော်လည်းကော်မတီမှမိမိနေရာကောင်းများပျောက်သွားမည် စိုးကာအရေးမလုပ်ဟုသိရှိရပါသည်။
သော်လည်း ဈေးအိမ်သာကိုမှု၎င်းတို့ကော်မတီများ၏ဆိုင်ခန်းနှင့်နီးသဖြင့်(နဂိုနေရာတွင် မထားဘဲ)နဂိုနေရာမှဈေးအပြင်သို့ထုတ်ကာထောင့်မျက်နှာစာတွင် နိုင်ငံခြားသားမျက်နှာပျက်အောင်ဆောက်လုပ်မည်ဟုသိရှိရသဖြင့်များစွာစိတ်ပျက်မိကြကြောင်း၊ထိုမှသာနဂိုနေရာ၊
About Nu Than
Nu Than has written 12 post in this Website..
View all posts by Nu Than →
ဈေးကော်မတီများ အကြံအဖန်လုပ်ခြင်းမှာ မှန်ကန်သည်
အကြံအဖန်လုပ်ခြင်းမှာ ဆိုင်ခန်းနေရာကောင်းကို ရွေးယူခြင်းဖြစ်သည်
ဝိသမလောဘကြောင့် အရာရာတိုင်း အမှန်တရား မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း
ဈေးခြံစည်း၇ိုးကျော်လွန်ကာ ရံခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသည် ဆိုင်ခမ်းများအတွက် ပလက်ဖေါင်းဆောက်ရန်ကျော်ပြီးကာရန် ထားသည်ဟုထင်မိပါသည် ဈေးကော်မတီမှ နေရာကောင်များကိုယူထားသည် ဆိုသည်မှာလည်း မှန်ကန်သော အချက်ဖြစ်ပါသည်
Nu Than says:
ထောက်ခံပေးသူ thandwethar နဲ့ thar ag တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကော်မီတီတွေဘယ်လောက်လောဘတက်
ကောင်းမရမှာစိုးလို့ ဈေးအိမ်သာကျအပြင်ထုတ်ပြီးအရှက်မရှိယိူကြတာကိုလူမြင်အောင်လို့တူပါတယ်၊သိတယ်မဟုတ်လား မြန်မာကဈေးအိမ်သာတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းနံစော်နေတယ်ဆိုတာ၊ အသိပါ၊လူ့မြင်ကွင်းမှာအိမ်သာထားတာမသင့်တော်ပါဘူး၊ကလေးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ထိခိုက်ပါတယ်၊
aguncle gyi ကတော ၁ ရှယ်ယာဆိုဘဲ ဘယ်လို့ပေးမတုံး ဟိ ဟိ? ဆိတ်ဝင်စားတယ် …
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်က ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ အမေး အဖြေကို သံတွဲသားများ
မည်သို့ တုံ့ ပြန်သနည်း။သိလိုပါတယ်ခင်များ။
မေးနေတာ ကိုဖြေပါ။စာမတတ်ဘူးလား။ခင်များတို့ အားလုံးမြေစာပင်တွေအဖြစ်မခံဖို့ လိုလားတယ်။